Margarekha श्रोत साधनको खोजि गरी कोहलपुर नगरलाई समृद्व बनाउँछु : मेयर रावत – Margarekha
श्रोत साधनको खोजि गरी कोहलपुर नगरलाई समृद्व बनाउँछु : मेयर रावत
लामो कम्युनिष्ट बाम आन्दोलनमा होमिएका कोहलपुर बाँकेका पुराना नेता हुन लुट बहादुर रावत । स्थानिय तहको निर्वाचनबाट कोहलपुर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका रावत दुई पटक साविक कोहलपुर गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष समेत भई स्थानिय निकायको अनुभव सम्हाली सकेका छन् भने यस क्षेत्रमै लोकप्रिय समाजसेवी तथा स्वच्छ छवि भएका नेताका रुपमा स्थापित छन् । २०४९ र २०५४ सालको स्थानिय निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिको दुई कार्यकाल अनुभव समालेका रावतले कोहलपुर क्षेत्रको विकासमा ठुलो योगदान पु्र्याएका छन् । कोहलपुरको विकास निर्माण र समृद्व कोहलपुर निर्माणको अभियानमा रहेक कामको सुरुवात गर्न रावतलाई नेतृत्व गर्न सबैले सहयोग गर्ने गरेको बताईन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, अन्य विकास निर्माणको काम गरी कोहलपुरसावीहरुको मन जित्न सफल रावत सरल स्वभाव भएका त्यागि नेता एवम् समाजसेवीका रुपमा स्थापित भएका छन् । कुनै विवादमा अहिले सम्म नपरेका उनी सरल स्वभावकै कारण सबैका प्रिय भएका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाको प्रथम मेयर भए पछि कोहलपुरलाई कस्तो बनाउने लक्ष्य छ ? अबको पाँच वर्ष भित्र कोहलपुर कस्तो हुन्छ ? र नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोहलपुर नगर सरकारले कसरी आफ्ना कामहरु सञ्चालन गर्नेछ ? यसै सन्दर्भमा रहेर कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुट बहादुर रावतसँग राम बहादुर रावतले गरेको कुराकानी :-
सबै भन्दा पहिला यहाँ लगायत तपाईको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई छ सँगै सफल कार्यकालको शुभकामना छ । सर्वप्रथम समग्रमा कोहलपुर नगरपालिकाको पछिल्लो योजना विकासको अवस्थाका कस्तो रहेको छ ।
धन्यवाद । कोहलपुर नगरपालिकाको पछिल्लो योजनाको विकास अहिले ठोस रुपमा यसै भएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन् । किनकी हिजो वडा नागरिक मञ्चले साना–साना योजनाहरु कतै ग्राभिल, कतै पिच, अन्य विकासका भएका छन् तर फेरी जनताले त्यहाँ उही विकास मागिरहनुभएको छ । यसरी हेर्दा हामीले यहाँको विकासका निम्ति ठोस योजना ल्याई विकास निर्माण कार्यमा सहभागि हुनेछौं ।
नगर परिषद् हुँदैछ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ ? वडा परिषद् नगरी नै नगर परिषद् हुने अवस्था आएमा वडाका योजनाहरु कसरी समावेश हुन्छन् ?
२०७४÷०७५को योजना तजुर्मा हिजोकै नागरिक मञ्च, वडा मञ्च र हिजोको सरकारले बनाएको संरचना नगरपालिकामा थियो त्यो गरिसकेको कुरो हो । तर अहिले आएर नगर सभा किन गर्नुप¥यो भने अब जनप्रतिनिधिहरु आईसकेको पछि २०७४÷०७५ वार्षिक कार्यक्रमलाई पूर्ण जनताका प्रतिनिधिहरुले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुप¥यो । पहिला बजेट थोरै मात्रामा रहेको पाइएको छ । एउटा वडा करिब २५देखि ३० हजार सम्म मात्र मध्ये अहिले केहि थप भएर आएको छ । अब हामी सरकारबाट पनि थप केहि बजेट आएको हुनाले वडा कार्य परिषद् वा वडा समितिबाट निर्णय गराएर आएका योजनाहरुलाई पास गर्नेछौं र यस वर्षका योजनाहरु कार्यन्वयन गर्नेछौं ।
२० वर्षको अन्तरालमा कोहलपुरका जनताको चाहाना कस्तो पाउनुभयो ?
करिब २० वर्षको अन्तरालमा कोहलपुरका जनताको इच्छा, चाहाना, आकाँक्षाहरु थुप्रै छन् । यसको व्याख्या गरेर कुनै साध्य नै छैन् । जनताको प्रतिनिधिहरु नहुँदा धेरै चाहानाहरु अपुरै छन् । जनताको प्रतिनिधिहरुसँग आफ्ना कामहरु निधक्कका साथ राख्न सक्ने, केहि जनताको प्रतिनिधिहरुले हाम्रो कामहरु गरे भन्ने हुने, हिजो कर्मचारीले गर्दा जनताको काम सहज रुपमा हुन नसकेको पाईयो । त्यस कारण करिब २० वर्ष भित्र जनताका चाहानाहरु धेरै फरक छन् ।
करिब २ महिना अन्तरालमा जनताले सेवा सुविधा केकेपाए, जस्तै तपाईको टिमले गरेका कुनै ३ वटा काम बताईदिनुहोस् ।
निर्वाचित भएको करिब २ महिना पुग्दै छ । हामीले दुई महिना भित्र केहि काम गरेका छौं भने केहि कामको सुरुवात गरेका छौं । जस्तै जनप्रतिनिधिहरु आउनुभन्दा पहिला नागरपालिका भित्रकै एउटा कोठामा १ देखि ७ नम्बर वडा सम्मका कामहरु गर्ने गरेका पाईन्थ्यो भने अहिले प्रत्येक वडाहरुका फरक फरक ठाउँमा काम गरी सेवा दिनसक्ने वातावरण निर्माण गरेको छौं । वडाको जनताले वडामा मै सेवा पाओस् । अर्को कुरा हामीले अहिले सम्म ४ वटा बैठक बसौं । हामीले गरेका काम कतै पुरा भएको छ कतै हुन बाँकी छ । एउटा प्रद्वतिको विकास भएको छ । हामीले अहिले सम्म त्यस्तो ठोस काम गरेका छैनौं, हामी निर्वाचित भएको करिब १०–१२ दिन पछि मात्र नगरपालिकामा बस्ने व्यवस्था भयो ।
कोहलपुर प्रदेश न ६ र ७ को प्रवेशद्वारपनि हो यी दुई प्रदेश को प्रवेशद्वार हुनुले येसको महत्व पनि बद्छ नै सुन्दर, सफा र स्वच्छ शहर बनाउने के के योजना छन् ? सफा, सुन्दर, समृद्व हरित नगर कोहलपुरबासी सपना कहाँसम्म पुगेको छ ?
यहाँको जनताको सपना पुरा हुने कुरा श्रोत र साधानमा भर पर्छ । आर्थिक ठुलो कुरो रहेछ । श्रोत र साधान जुटाउँदै जाँदा हाम्रो अवधिमा पनि पुरा हुन सक्छ तर पुरै पुरा नभए पनि केहि कुरा हामी सुरुवात गर्न सक्छौं । हामीले केहि सुरुवात गरियौं भने अर्को आउनेले पुरा गर्नुपर्छ । हामी चाँही सुन्दर, सफा, स्वच्छ, समृद्व कोहलपुर निर्माण गर्ने कुरा सुरुवात गर्छौ भने मलाई आत्मा विश्वास छ । विभिन्न योजनाहरु ल्याएर हामी कोहलपुर निर्माणको अभियानमा लाग्छौं ।
कोहलपुरमा सबै भन्दा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको यलानि जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्नु हो । तपाई निर्वाचित भएसँगै यसलाई आफ्नो पहिलो प्रथामिकतामा राख्छु भनुभएको थियो । यहाँका जनताले भोगचलन गर्दै आएको आफ्नो जग्गाको मलिक कहिले बन्छन् ? त्यसका लागि आवश्यक काम गर्न तपाईको टिम कहिले देखि लाग्छ ?
जनता सरकारी प्रति जमिनमा आफुले भोगचलन गरेर ५० औं वर्ष देखि बसोबास गर्दै आईरहेका छन् । र त्यसैमा आफ्नो साँझ बिहानको समस्या हल गरीरहेका छन् । यो जनताको बसाई अव्यवस्थित हो । अव्यवस्थित किन भएको हुँ भने आफैमा दर्ता नहुँदा अव्यवस्थित बसोबास भनिन्छ । कतै कतै त के पनि भन्छ भने जंगलको छेउछाऊमा बसेकालाई अतित्रमण पनि भन्ने गरेका छन् । उदारणका लागि कोहलपुर नगर विकासको नाममा दर्ता छ तर यहाँ आएर घरबास बनाएर बसेका छन् । घर पक्की बनाएर बसेका छन् । एकले अर्कोलाई बेच्दै पनि गएका छन् । यो अतिक्रमण हो । अतिक्रमण पनि अति भईरहेको छ जो जनताले घर बनाएका छन् । जग्गा बेच्दै आएका छन् । त्यस्तैले चुनाव प्रचार प्रसारमा जनताको घरमा जाँदा त्यस्तै यलानि जमिनमा बसेका जनताहरुलाई अहिले संविधानले जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारलाई स्थानिय सरकारले प्रयोग गर्ने छ । हामी निर्वाचित भयौं भने हामीले पक्कै पनि जनताको यो अव्यवस्थित बसोबासलाई दर्ता गरेर घरजग्गा धनि पुर्जा वितरण गर्नेछौं भनेर भनेका थियौं । त्यो हिजो पनि भनेको थिएँ अहिले पनि भन्छु । तर अप्ठ्यारो के रहेछ भने हामी हिजो संविधानको वास्तविकता नबुझेरै भनियौं अहिले यहाँ आईसके पछि के भयो भने यसको कानून निर्माण भएकै रहेन्छ । संविधानले उल्लेख गरीदियो तर आवश्यक कानून बनेको छैन् । यसको कानून आयो भने पहिलो प्राथमिकता मेरो लालपुर्जा वितरण नै हुनेछ ।
कोहलपुरका छाडा कुकुर, छाडा गाईको समस्याबाट यातायात व्यवसायी लगायत सबैले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न कहिले लाग्नुहुन्छ ?
छाडा, कुकुर, छाडा पशु अहिले कोहलपुरको जटिल समस्या बन्दै गएको छ । छाडा पशुहरु कोहलपुर बजार जताततै पाईन्छ । त्यो सडकको बिचको हरियाली ‘ग्रिन बेल्ड’मै बास बस्छन्, त्यही चर्चछन्, त्यसले पनि दुर्घटना बढाएको छ । यो चुनौतिपूर्ण समस्या हो, यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी चिन्तित छौं । सबै सँग सहकार्य गरीरहेका छौं की यी छाडा पशुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर । पशुको जिम्मा कसलाई लगाउनले ? कसले लिन्छ जिम्मा । अब हामीले लिने हो भने हामीसँग त्यो व्यवस्थापन गर्नका लागि कर्मचारी छैनन् । हाम्रो संविधानले गाईलाई गौमाता भनेर नेपाली समाजमा पुज्ने गरेकाले तिनलाई कहाँ लगेर राख्ने कुनै उपाया नै छैन् ।
कोहलपुरमा गर्मि, जाडोमा धुलो, मनसुनमा हिलो सगैँ ठाउँ ठाउँमा फोहोरको डंगुर बढ्दै गएको छ ? फोहोर व्यवस्थापनका लागि दिर्घकालिन योजना के छ ?
यसको निश्चित अलि लामोसम्मका लागि डम्पिक साईड भनिन्छ । डम्पिक साईडको खोजि छ । हामी आउनु भन्दा पहिला नगरपालिकाले एउटा सम्झौता पनि एउटा सामूदायिक वनसँग गरिसकेको छ । करिब ५०÷६० वर्ष सम्म साईडको अर्को स्थल खोज्नुपर्ने अवस्था नहोला । त्यो स्थान छनौट भई त्यहाँसम्मको बाटो निर्माण गर्ने पक्षमा छौं । बाटो निर्माण भईसे पछि कोहलपुरको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नमा हामी लाग्छौं । कोहलपुरलाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर नगर बनाउने कल्पना गरेका छौं । सुन्दर नगरको सपना देखेका छौं त्यो सपना पुरा गर्नका लागि हाम्रो टिम लागि पर्नेछ । त्यसको फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख पक्ष
हो । फोहोर नहटाएर कोहलपुर स्वच्छ, सफा र सुन्दर हुँदैन् ।
कोहलपुर बसपार्कदेखि उतर जुन बस्तिलाई अहिले सुकुम्बासि बस्ति भनेर चिनिन्छ तर त्यहाँ अहिले अधिकाश घरहरु पक्कि घरहरु बनेका छन जुन खर्चको हिसाबले १५र१८ लाखसम्म पर्ने गर्छ के तिनि वास्तविक सुकुम्बासि हुन वा होइन् ? सुकुम्बासिका नाम राजनीतिक दलहरुले कहिले सम्म भोट माग्ने बनाउँनुहुन्छ या अन्त्य गर्नुहुन्छ ? अवस्थित बस्तिहरुलाई व्यवस्थित बनाउन कति समय लाग्नु सक्छ ?
सरकारले एउटा योजना ल्यायो मुक्त कमैया वस्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर । मुक्त कमैयाहरु यो जिल्लामा पनि छन् । ती मुक्त कमैयाहरुले यति ठुला घरहरु बनाउन सक्दैनन् । तर मुक्त कमैयाहरुले सरकारबाट जमिन प्राप्त ग¥यो यसलाई अरुले कसैले लग्यो र घरहरु बनाएको होला । सानो सानो घरहरु त मक्तकमैयाहरुले बनाएका छन् उनीहरुले घर नै बनाउन नसक्ने भन्ने त होइन् तर अलि ठुला र राम्रा घरहरु बनाएको भनेको त उनीहरुबाट फाईदा उठाएर त्यहाँबाट भागाएर घर बनाएको हुनसक्छ । तर यस्तो जमिन भोलि सरकारले त्यो व्यक्तिको नाममा गराउँछ वा गराउँदैन् त्यो त म भन्न सक्दिन तर यो गराउन आवश्यक छ । त्यस्तै मुक्तकमैयाकै साईड मुक्त कमैयाहरु भनेर बसेका छन् जो घरजग्गा प्राप्त गर्न सकेनन् । दुई खाले मान्छे छन् । कसैले घरजग्गा प्राप्त गरेका छन् भने कसैले प्राप्त गरेका छैनन् । अब सरकारले कानून निर्माण गरी प्रदेश सभाले हामीलाई अधिकार दिने बितिकै यो समस्या समाधान हुनेछ । हामी यो प्रक्रियालाई कानूनले दिएको अधिकारमा रहि काम गर्नेछौं ।
कोहलपुरमा न सभाहल छ, न पार्क, न मनोरन्जन स्थल छन,चौराहाको गती सबैलाई थाहा छ, साथै एकदिन पानी पर्दा कोहलपुर किन रुन्छ ? यी सबै समस्यामा कहिले ध्यान जान्छ स्थानीय सरकारको ?
अब हामीले कोहलपुर नगरपालिका भित्रको श्रोत र साधानले पुगेसम्म सबै क्षेत्रको विकास गर्न लागि पर्नेछौं । पछिल्लो सयममा कोहलपुर डुबानको समस्याले खतराको संकेत देखाएको छ ।हामी डुबानहुनबाट बचाउनका लागि विशेष योजना ल्याउनेछौं । हामीले एउटा सोच बनाएका छौं त्यो सोचका साथ काम गर्नेछौं ।
कोहलपुर नेपाली साहित्य को उर्बर भुमी हो । पुर्णिपूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान कोहलपुर बाँके यहाँको एकमात्र साहित्यिक संस्था हो । तर बिडम्बना अहिले सम्म यस संस्था को निजि कार्यालय छैन । सभाहल निकै परको कुरा हो । यसका लागि साहित्य पारखी हरु पटक पटक नगरपालिकाको ढोका सम्म पुगेर प्रस्ताब राखेको कुरा धेरै पटक बाहिरीएकोछ साहित्यिक प्रबद्र्वनका लागि कोहलपुर नगरपालिकालाई अब कति समय लाग्छ ?
साहित्य मानिसको आत्माबाट उत्पन्न हुने कुरा हो । साहित्यले समाज परिवर्तनमा महत्वर्पूर्ण योगदान गरेको छ । कोहलपुर क्षेत्रको साहित्यको विकास, संरक्षणको लागि सबै भन्दा पहिला साहित्य क्षेत्रमा आवद्व साहित्यकारहरुनै सक्रिय हुनु प¥यो । साहित्य संस्थाका लागि आवश्यक जग्गा कतै खोजि गरी भेट्न्छि भने हामी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्छौं । तर त्यसका लागि स्वयम् साहित्यकार र हामी बिच सहकार्य हुनुपर्छ । साहित्यको संरक्षण र विकास गर्न कोहलपुर नगरपालिका तयार छ त्यसमा सबै ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।
कोहलपुरको डुडुवा खोलामा ढल मिसाइ दुषित पार्ने कार्य तिव्रमा रुपमा बढ्दै गएको छ । यस्तो कार्यलाई तत्काल रोकि आर्को बाग्मती बन्नबाट जोगाउन कस्तो रणनीति र योजना छ ?
हो मैले पनि डुडुवा खोलामा ढल मिसाउने काम भईरहेको छ भन्ने कुरा तर यो तत्काल रोकिन्छ । हामी रोक्छौं । डुडुवाको दाँया र बाँया दुवै तिर तट्बन्दन गरी यसलाई एक पर्यटकिय रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । हामी खोलाको बिच–बिचमा पार्कहरु निर्माणगरी पर्यटकिय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने योजना लिएका छौं । यदि डुुडुवा नालामा कसैले ढल मिसाएको छ भने हामी अनुसन्धान गरी आवश्यक कानून बमोजिम कारवाही गर्न तयार छौं । स्वच्छ र सफा कोहलपुर निर्माणको यो महान अभियानमा सबैलाई सहयोग गर्न अनुरोग गर्दछु ।
कोहलपुर खानेपानिसंस्थान यहाँ कैअगुवाइमा झन्डै ८ वर्ष पहिले सम्पन्न भयको हो जबकि ५० सौ वर्षलाइ कोहलपुरलाई पानिको समस्या हुँदैन भन्ने लागथ्यो तर अहिले खानेपानि संस्थानको हालत दर्दनाक छ नाममात्र को खानेपानि संस्थान बनेकोछ कोहलपुरको अधिकाम्सठाउँ र बसपार्क क्षेत्रमात धाराकोपानि नमनिसान केही आउँदैन के अब यो नियमित सुचारु गराउने र नयाँ कुनै भरपर्दाे योजना छ ?
कोहलपुर खानेपानीले थप पानी ट्ङ्याकी निर्माण गरेकोछ । अब केहि समय भित्र त्यो पानी सञ्चालनमा ल्याई कोहलपुरका जनतालाई खानेपानीबाट बन्चित गर्नेछैन् । श्रोत र साधानले भरिपूर्ण भयो भने जनताले पूर्ण रुपमा खानेपानी पाउँनेछन् । हामी पनि जनतालाई सहज रुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि परेका छौं ।
कोहलपुरमा के के कामहरु गर्न बाँकी रहेका छन् ।
कोहलपुरमा कामहरु भर्खर सुरु भएका छन् । कोहलपुरमा धेरै कुराको विकास गर्नु छ । शिक्षा गाउँगाउँमा पु¥याउनु छ, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत र सबै भन्दा पहिला पत्येक वडामा सडक पु¥याउनु छ । सडकले कोहलपुरलाई घेराउ गर्नुछ त्यसका लागि चाहिने श्रोत र साधान नै हो र त्यो श्रोत र साधानको खोजिमा छौं । जनताका चाहान र भावनाको कदर गर्दै म मेरो कार्यकालमा आफुले गर्नुपर्ने सबै कामहरु गर्नेछु ।
यहाँको सुरक्षा, शान्ति, विकास, आर्थिक समृद्धि तिरको कोहलपुर बनाउन नगरपालिका र आम जनता बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
यहाँको जनता नै स्थानिय सरकार हुन् । जनताको सहभागिता बिन कुनै पनि काम हुन सक्दैन् । कोहलपुर नगरपालिका नै जनता हुन् । त्यसैले यहाँ सहकार्य हुन आवश्यक छ । तसर्थ कोहलपुरका जनताले कोहलपुर नगरपालिकालाई रहेक कुरा साथ र सहयोग गरी कोहलपुरको विकासमा एउटा इट्टा थप्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु । हामी संधै एउटै कुरामा चिन्तित छौं की जनताले चाहेको विकास समयमै हुँदैनकी भनेर तर जनताले साथ दिए कोहलपुुरको विकास हुने मा विश्वस्त रहेको छु ।
र अन्त्यमा कोहलपुर कस्तो बन्छ तपाईको कार्यकालमा ?
स्थानिय तहको निर्वाचनबाट हामीलाई विजय गराउनुहुनु सम्पूर्ण कोहलपुरका जनतालाई धेरै धेरै धन्यवाद । हामी कोहलपुर निर्माण गर्नका लागि जनताको आदेशलाई आत्मासाथ गर्ने छौं । हाम्रो प्रमुख लक्ष्य कोहलपुरलाई आधुनिक नमूना शहर निर्माण गर्नुहो । मेरो पालामा कोहलपुरले विकासका त्रिव गतिमा अगााडि बढ्ेको छ । यसका लागि सबै सरकारी तथा गैरसरकारी, संघसंस्था, विभिन्न समाजिक संस्थानहरु लगायत यहाँ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, समाजसेवी, बुद्विजीवि, शिक्षा पे्रमी लगायत स्थानिय जनताको साथ र सहयोगले मात्र यहाँको विकास हुने भएकाले सबैसँग मिलेर काम गर्नेछु । धन्यवाद ।
२६ श्रावण २०७४, बिहीबार १७:४२ प्रकाशित